N'ogbe Lightweight Slub 100 Cotton V Neck T Shirts na ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ya | Yiwan
Slub dị fechaa 100 Cotton V Neck T Shirts nwere mbelata raw
Slub 100% t-shirt owu na-eme ka ọ dabara adaba na v-neckline mara mma. Ngwunye hem raw na-agbakwunye nkọwa na dabara adaba wee mepụta ụdị ejiji, nke dị mma na nke mara mma.
Obere aka uwe
Nkọwa hem raw
Asọmpi price China T-Shirt na Cotton T Shirt price, Iji mezuo ebumnuche anyị nke "onye ahịa mbụ na uru ọ bụla" na imekọ ihe ọnụ, anyị na-eguzobe otu ndị ọrụ injinia ruru eru na otu ndị na-ere ahịa iji nye ọrụ kacha mma iji mejuo ndị ahịa anyị. ' chọrọ. Nnọọ na-akwado anyị na isonyere anyị.
1.Closed na ákwà na ngwa ahịa ahịa, na-agbanwe na ejiji ejiji na ihe onwunwe
4.Ọkachamara ndị ọrịa na-ere ahịa maka nkwurịta okwu nke ọma
5.Custom ọrụ dị ka n'okpuru
A3: T / T, Ego Gram, 40% nkwụnye ego n'ihu, 60% itule tupu nnukwu Mbupu.
Innovation, elu mma na ntụkwasị obi bụ isi ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ anyị. Ndị a ụkpụrụ today extra than ever form the foundation of our success as an internationally active mid-size company for Hot sale Factory China Lightweight Slub Jersey Women V Neck Top Blouse , Na-eduga na-emekarị nke ubi a bụ anyị persistent objective. Ịnye ngwaahịa na ihe ngwọta nke 1st klas bụ ebumnuche anyị. Iji mee ogologo oge mara mma, anyị ga-achọ ịkwado ndị enyi niile nọ n'ụlọ gị na mba ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ọ bụla n'ime ngwaahịa anyị, cheta ka ị ghara ịla azụ ịbanye na anyị.
Ụlọ ọrụ na-ere ọkụ na-ere ọkụ China Clothing and Blouse price, Anyị na-ewebata dị ka otu n'ime ndị na-eto eto na-emepụta soplaya na mbupụ nke anyị ngwa ahịa. Ugbu a, anyị nwere otu ndị nwere ahụmahụ a zụrụ azụ nke raara onwe ya nye bụ ndị na-ahụ maka ịdịmma na ọkọnọ n'oge. Ọ bụrụ na ị na-achọ Good Quality na ezigbo ego na nnyefe n'oge. Kpọtụrụ anyị.
Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ maka China Cotton T Shirt na ọnụahịa uwe elu, ụdị niile na-egosi na weebụsaịtị anyị bụ maka ịhazi ya. Anyị na-enweta ngwaahịa niile nke ụdị nke gị niile chọrọ. Echiche anyị bụ inyere aka na-eweta obi ike nke ndị na-azụ ahịa ọ bụla na onyinye nke ọrụ anyị kacha ezi obi, yana ngwaahịa ziri ezi.
Nke gara aga: Ndị nwoke kpochapụrụ 60 Owu 40 uwe elu uwe elu polyester pink V-olu
Osote: Ụzọ Ndị ikom Owu Eyelet V-olu Henley T-shirts
Omenala Lantern Short Sleeve Fleece Pink Sweatshirt
Omuma mgbụsị akwụkwọ Jumper Ndị nwoke na-eme olu owu dọkpụrụ...
Omenala Crew Neck Jumper Men Heather Raglan Slee...
Okporo ụzọ Ụdị owu jumper karịrị akarị dobe Shoul...